Muuri News Network » Maamulka degmada Baraawe oo magacaabay masuuliyiin cusub +Magaca.
Maamulka degmada Baraawe oo magacaabay masuuliyiin cusub +Magaca.
Maamulka degmada Baraawe ee gobolka Shabelaha Hoose ayaa ilaa 6 tuulo waxa uu umagacaabay masuuliyiintii maamuli lahaa tuulooyinkaas hoostaga degmada Baraawe waxaana xusid mudan in tuulooyinka qaarkood ay weli gacanta kuhaayaan dagaal yahano katirsan Al-shabaab.
Gudoomiyaha degmada Baraawe ee gobolka shabelaha Hoose oo xog hoose siiyay muuurinews.comm ayaa waxa uu sheegay in ujeeda kadambeysa magacaabista dadkaas ay tahay sidii loo dar dar gelin lahaa amaanka tuulooyinka hoostaag degmada Baraawe.
Ibraahim Cabdi Nuur iyo Xasan Cabdiraxman oo kamid ah Masuuliyiinta lamagacaabay isla markaana masuul ka ah tuulooyinka Kuunya barrow iyo Marin gubaay ayaa waxay sharaxaad kabixiyeen shaqada ugu horeysa ay qaan doonaan iyagoo baaq dheer udiray dowlada Somaaliya.
Degmooyin katirsan gobolka Shabelaha Hoose ayaa waxaa qaar kood hada lafilayaa in maamulka Koonfur Galbeed uu umagacaabo masuuliyiintii maamuli laheyd maadaama qaarkood dhawaan laga saaray Al-shabaab.